Creative Space Design: ပါကြီးပြောမိတဲ့ light အကြောင်း-1
ပါကြီးပြောမိတဲ့ light အကြောင်း-1
ဒီနေ့ခေတ်မှာ...exterior ပဲဖြစ်ဖြစ်..interior ပဲဖြစ်ဖြစ်..မပါမဖြစ်..မျိုးစုံအောင်ပါတာက
Light ပါ..အဲဒီ light တွေထဲက Natural light source နေ နဲ့ Skylight ,
နောက်..artificial light တွေ..များလွန်းလို့..သိတောင်မသိသလိုဖြစ်နေပြီ...
ဒါနဲ့ပဲLight နဲ့ပတ်သတ်ပြီး..အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး...သိချင်လို့ ဖတ်လိုက်တာ..
စာအုပ် ၂ အုပ် ၃ အုပ်လောက်ပေါင်းမှ..ရေးရေးလေးသိလာလို့..ရေးမလားလို့ပြောကြည့်တာ..
ရေးရေလေးပဲ သိတာဆိုတော့ ဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်..အသိမှားတွေ..ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..
အမြည်းအနေနဲ့က ..lighting units တွေပေါ့ဗျာ...candela, Lumen , Footcandle , footlambert
တွေရဲ့..defination တွေကို ရှင်းလင်းခြင်းပေါ့...
ကျွနိတော် light အကြောင်းမပြောခင်မှာ..အသိမှားခဲ့တာလေးတွေက စပြောပါ့မယ်။
..ဒီလိုပါ..အရင်က ကျွန်တော်တို့..မီးထွန်းဖို့ဆို..ဝပ်၄၀ မီးချောင်းတစ်ချောင်းတို့..
၆၀ ဝပ်မီးသီးတစ်လုံးတို့ဆိုပြီးပြောခဲ့ ဝယ်ခဲ့ကြတယ်...ရေးရေးလေးတော့စဉ်းစားကြည့်ဘူးတယ်.
ဝပ်၄၀ ၄ပေမီးချောင်းလောက်ဘာလို့ မလင်းတာမျိုးပေါ့နော်...ကျွန်တော်လဲ design တွေ project တွေလုပ်ခဲ့တာမနည်းပါဘူး...
ဒီလိုပဲ အဲဒီအသိနဲ့လုပ်လာခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှက်လို့မဆုံးပါဘူး.. Sad
.တစ်ကယ်က ဝပ် Watt ဆိုတာက..သူ့ရဲ့energy consume ပါ။(This means the actual power consumed)
lumen ကမှ..light intensity အလင်းပမာဏ..အလင်းပြင်းအားပါ..ပုံမှန်အားဖြင့် Watt ၆၀ မီးသီးက ၈၅၀ lumen ထုတ်ပါတယ်...
Efficiency အနေနဲ့ ၁၆.၅ lumen/watt ပါ..ဆိုလိုတာက ၁ watt ကို ၁၆.၅ lumen ထုတ်ပေးတော့ watt ၆၀ ဆိုတော့ ၈၅၀ lumen ပေါ့..
အဲ..၄၀ watt မီးချောင်း..fluorescent lamp က Efficiency အနေနဲ့
ထုတ်လုပ်တဲ့ product ပေါ်မူတည်ပြီး ၄၀ lumen/watt ကနေ ၆၀ lumen/watt
ကြားရှိတယ်လေ...ဒါဆိုရင်တော့ လင်းတာ ဘာလို့ကွာရတယ် ဆိုတာသိပြီထင်ပါတယ်....
Question :space နဲ့lumen ချိန်ဆတဲ ့အကြောင်းလေးလဲ သိချင်ပါတယ် ကိုပါပါ ရေ..။ အဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ ဘယ်လိုအခန်းမျိုးတွေအတွက် lumen ဘယ်လောက်ရှိသင့်တယ် ဆိုတာလေး။ Natural Lighting အနေနဲ့lumen ဘယ်လောက်ရအောင် Lighting source တွေ ထားသင့်သလဲ ဆိုတာရယ် available light မရှိတဲ ့အချိန်မှာ Lighting points တွေအတွက် တွက်ချက်နည်းလေးတွေရယ် နည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးပါလား ?
Ans: အဲဒီအဖြေက လွယ်မရောင်နဲ့တော်တော်ခက်တယ်ဗျ...ကျွန်တော်လဲ စာတွေဖတ်ပြီး အဲဒီအဖြေတွေနောက်ကိုလိုက်တာ
စိတ်ကြိုက်မဖြစ်ဘူး...စာတွေထဲမှာက အဲဒီလိုအပ်မယ့် lumen ကို ပေးထားပြီး...ဘယ်လို design လုပ်မလဲပဲပါတယ်...
၂အုပ်၃အုပ်လောက်ကိုအဲဒီလိုပဲ....ဘာလို့များအဲလိုပဲရေးနေတာလဲပေါ့..တွေးမိတယ်..နောက်ဆုံး..လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လာက်က electrical engineer
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားလေးသတိရပြီး..စပ်စပ်တွေးမိမှပြေလည်သွားတာပါ။...Architectural standard တွေမှာ စာကြည့်တိုက်ဆို
ဘယ်လောက် lumen ,အိပ်ခန်းဆိုဘယ်လောက်,..စသဖြင့် code လေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်...ဒီလိုပါ...ဥပမာ ၄ ပေ fluorescent မီးချောင်း T 8
ဆိုပါဆို့..အကြမ်းဖြင်း ၂၈၀၀-၃၀၀၀ lumen လောက်ရှိတယ် ..ဒါဆို ၁၀ပေ ၁၂ ပေအိပ်ခန်းလောက်ဆို ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီ..ok..
ထားပါ..၃၂၀၀ lumen လောက် ပိုစိတ်ချရအောင်..ခက်တာက ဒီခေတ်ကြီးမှာက မီးကို dramatic ဖြစ်အောင် ထွန်းတယ်လေ...
ဥပမာ..အခန်းအလယ်မှာ အဖြူရောင်မီးဝိုင်းလေး..နောက် ခုတင်ခေါင်းရင်း ဗယ်ညာတစ်ဘက်ဆီမှာ down light (spot lights)အသေး၂လုံး
နောက် bed side table lamp လေးတွေနဲ့ဆိုရင် အဲဒီ lumen ကျော်သွားနိုင်တယ်..ဒီခေတ်မှာ ဒါမျိုးပဲ သုံးမှာပဲလေ...
ဒါကြောင့် ..designer ရဲ့ပေးချင်တဲ့ mode တွေပေါ်မူတည်ပြီး ရလာတဲ့ lights တွေရဲ့lumen တွေနဲ့ design လုပ်ရတာပဲလို့
ကျွန်တော် သုံးသပ်မိပါတယ်..အလင်းချိန်ဖို့အတွက်တော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို အကြမ်းအားဖြင့် ၄ ပေချောင်း daylight က ၂၈၀၀ နဲ့ ၃၂၀၀ lumen
ကြားမှန်းပြီး အဲဒီအလင်းပေါ်မူတည်ပြီး ချိန်ဆကြည့်နိုင်ပါတယ်..
p.s..ကျန်တာတွေက ကျွန်တော်ဆက်ရေးမယ့် posts လေးတွေွ ဖတ်ရင်းသိသွားမှာပါ...
light နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အရင်ဆုံးအခြေခံသဘောလေးကိုမြင်ကြည့်ရအောင်နော် ...
အလင်းရောင်ထုတ်ပေးတဲ့ အရာ နဲ့ သူရဲ့တိုင်းတာတဲ့ unit ..နောက် အလင်းထိခံရတဲ့နေရာ နဲ့ သူရဲ့တိုင်းတာတဲ့ unit ပြီးရင် အလင်းပြန်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံးကို ရိုက်ခတ်ပြီး
မြင်ကွင်းမှာ သဘာဝလောကကြီးကို ပုံဖော်ပေးတဲ့ ပြန်လင်းတန်းတွေရဲ့တိုင်းတာတဲ့ unit ရှိပါတယ် ..... Smiley
Light Source Quality(I) ....... သူကတော့ အလင်းထုတ်လွှွတ်တဲ့ ပမာဏပါ..သူ့ ကို candelas(cd) or candlepower(cp) တွေနဲ့ unit သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
င်္Flow of Light ........ Luminous flux(Lm) လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်လွွှတ်တဲ့ အလင်းပမာဏပါ(the time rate of flow of light).
သူ့ကို lumen (Lm)unit နဲ့ ပမာဏသတ်မှတ်ပါတယ်။
Lumen .........lumen ဆိုတာကတော့ light source or point light source ဥပမာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ထွန်းလို့လင်းတဲ့အလင်းပေါ့..
အဲဒီဖယောင်းတိုင်ထွန်းတဲ့အခါ အလင်းတွေဟာ 360 degree ပတ်လည် sphere သဏ္ဍန် အလင်းထုတ်လွွှတ်တဲ့အခါ
radius 1 ft unit ရှိတဲ့ sphere ရဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာ 1 sq ft( 1 X 1) ပေါ်မှာရှိတဲ့ ပမာဏကို 1 lumen လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ကဲဒါဆို အလင်းအားကြောင့် ထိရိုက်ခံရတဲ့ area အကြောင်းဆက်မယ်နော်...
Incident Light or Illuminance (E).....သူကတော့ အလင်းအားကြောင့် ထိရိုက်ခံရတဲ့ area ကခံစားရမယ့် အလင်းပမာဏဖြစ်ပြီး သူ့ကို
footcandles(fc) or Lux (lx) units တွေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်..
1 footcandle = 1 lumen/square foot (1 lumen အလင်းအားကြောင့် 1 sq ft area မှာခံစားရတဲ့ အလင်းပမာဏ)
1 lm = 1 fc * 1 sf
1 lux = 1 lumen/square meter(1 lumen အလင်းအားကြောင့် 1 sq meter area မှာခံစားရတဲ့ အလင်းပမာဏ)
1 lm = 1 lx * 10.76 sf (3.3' x 3.3')
So ..1lm = 1 fc * 1 sf = 1 lx * 10.76 sf
1 fc = 10.76 lx ဒါလေးက fc နဲ့ lx ရဲ့ဆက်စပ်ချက်ပါ။
နောက်ဆုံးကတော့ အလင်းအားကြောင့် ထိရိုက်ခံရတဲ့ area ကခံစားပြီး မျက်နှာပြင်က အလင်းပြန်လာတဲ့ အကြောင်းပေါ့နော်..
Reflected Light or Luminance (L)(or Exitance)....ဒါကမှ ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံးမှာ သဘာဝလောကကြီးကို မြင်ရဖို့ အလင်းတွေထိရိုက်ပြီး အရာဝတ္တုတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်က
ပြန်လာတဲ့ အလင်းတွေရဲ့ပမာဏကိုဖော်ပြပေးတာပါ။သူ့ရဲ့units တွေက တော့ cd/sq meter or cd/sq ft တွေဖြစ်ပြီး
SI ရော Metric နှစ်မျိုးလုံးအတွက် footLambert လို့ လဲ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် ..
cd/sq m * 0.2919 = footLambert
cd/sq ft * 3.1416 = footLambert
footLambert * 3.4263 = cd/sq m
footLambert * 0.3183 = cd/sq ft ဒါတွေက units ဆက်ဆက်မှုလေးတွေပါ။
တွဲပါလာတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ် ....
Light sources တွေမှာ point light source (မီးလုံး) , Linear light source (မီးချောင်း) , Area light source (ceiling plain light) လိုမျိုးအခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ တွေ အသုံးပြုနေတဲ့ ..မြင်တွေ့နေရတဲ့ light source တွေရဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေ ရဲ့အကြောင်းလေးတွေ အခြေခံအားဖြင့်သိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Incandescent Light လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးအစားပါ ...ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငယ်ငယ်လေးထဲက အသုံးများတဲ့ ရိုးရိုးမီးသီးတွေပါ။
1.Traditional Light Bulbs
2.Halogen Light Bulbs
3.Incandescent light Bulbs with incorporated reflector
Traditional Light Bulbs ကတော့ ပုံမှန်မီးသီးတွေပေါ့ ..သူက သတ္တုစလေးကို အလုံပိတ်ဖန်လုံးထဲမှာ gas ထည့်ပြီး electric နဲ့ ဓာတ်ပြုပြီး heat energy နဲ့ light energy
ထွက်လာပြီး အလင်းထွက်လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့ 40 watt တွေဘာတွေက သူ့ရဲ့ စားသုံးတဲ့ ပမဏပါ။..သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ အပူများပြီး ထုတ်လွက်တဲ့အလင်းနည်းတော့
သက်တမ်းမကြာဘူးပေါ့..ဈေးတော့သက်သာ ပါတယ် ...
.Halogen Light Bulbs ကတော့ Traditional Light Bulbs နဲ့ အလားတူပြီး ကွာတာက gas ကို Halogen ထည့်တဲ့ အတွက် ပိုပြီးအလင်းထုတ်နိုင်ပြီး watt စားသုံးတာနည်းပြီး
သက်တမ်းပိုကြာပါတယ်...တစ်ခုပဲ မျက်နှာပြင် ကတော့ ပိုအပူများပါတယ်။..အကြည်မီးသီးတွေပေါ့...
Incandescent light Bulbs with incorporated reflector ကတော့ light fixture ကို အလင်းပြန်တဲ့ အရောင် coating လုပ်ပြီး direction control လုပ်ထားတာပါ။အလင်းပြန်မျက်နှာပြင်ပါတော့
စားသုံးမှုနည်းနည်းနဲ့ အလင်းများများရပြီး သက်တမ်းပိုကြာတာပါပဲ....အောက်မှာ ပုံလေးကိုလဲ နမူနာကြည့်နိုင်ပါတယ်...
နောက်ထပ်က Fluorescent Lamps ပါ...သူ့ကိုတော့ ပုံမတင်တော့ဘူးနော် ...လူတိုင်းလိုလိုသိကြမှာပါ။
သူကတော့ heat energy ပေါ်အခြေခံတာမဟုတ်ပါဘူး ...tub ထဲကို mercury vapor တွေထည့်ပြီး electric နဲ့
ဓာတ်ပြုပြီး ultraviolet light(... ultraviolet ဆိုတာ short-wave length ဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်စေ့နဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူး...) ထွက်လာပြီး....phosphors(မီးစုန်း)သုတ်ထားတဲ့
မီးချောင်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေမြင်နိုင်တဲ့ အလင်းတွေထုတ်ပေးပါတယ်။
သူကတော့ incandescent light တွေထက် အလင်းပိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး watt စားတာလဲနည်းပါတယ်။...သက်တမ်းလည်းပိုကြာပါတယ်။နာရီ ၉၀၀၀ နဲ့ ၂၀၀၀၀ ကြားလောက်လို့
ဥပမာ ...F 48 T12 မီးချောင်းဆိုရင် ၄၀ watt စားပြီး 3150 lumen အထိထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။efficacy အနေနဲ့ဆို 79 lumen/watt လောက်ရှိပါတယ်။
အဲ F ဆိုတာက Fluorescent 48 က 48 လက်မ အရှည် ...T ဆိုတာကtube shape ..12 ဆိုတာက 12/8 လက်မ(မီးချောင်းရဲ့diameter)ပါ။
နောက် သူ့ရဲ့color က warm white ,cool white ,day light စသဖြင့် များစွာရှိလို့ design လုပ်ရာမှာ အဆင်ပြေသလို သတိမထားမိရင်လဲ color match မဖြစ်ပဲ
အဆင်မပြေပါဘူး ...နောက် သူ့ကို ခဏခဏ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် များရင် သက်တမ်းတိုတတ်တယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
နောက် သူ့ကို dimmer လုပ်လို့မရပါဘူး ...ဘာလို့လဲတော့ မပြောတော့ဘူးနော် ...အဲဒီကိစ္စ detail သိချင်တယ််ဆိုရင် wiki မှာဖတ်ကြည့်ပါနော်...
နောက်ထပ်ရေးပေးမှာကတော့ compact Fluorescent Lamp ပါ။...
CFL လို့ခေါ်တဲ့ compact fluorescent lamp ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးများလာတဲ့ အများအားဖြင့် မီးချောင်းကွေးလေးတွေ (energy saving lamp) တွေပါပဲ။
သူက fluorescent lamp type ပါပဲ..ဒါပေမယ့် energy စားသုံးအားနဲ့ အလင်းထုတ်တဲ့ lumen ပမာဏပိုများသလို သက်တမ်းအားဖြင့် ပိုကြာရှည်ခံပါတယ်..
သူ့ကို အဓိကက incandescent light တွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ပါပဲ...သူ့ရဲ့efficiency က 60 to 72 lumens per watt ရှိပြီး life time က ၆၀၀၀ က နေ ၁၅၀၀၀ hours ရှိပါတယ်။
သူက incandescent light တွေထက်ဈေးပိုများပေမယ့် စားသုံးမှုနည်းပြီး ..သက်တမ်းကြာ ..အလင်းပိုပေးနိုင်လို့ ..မီတာခ သက်သာ ..အရေအတွက် နည်းနည်းနဲ့ အလင်းရ ..
ခဏခဏ မလဲရတော့ ရေရှည် အတွက် များစွာ အဆင်ပြေပါတယ်...သူ့ကို dimmer လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး..အဲလိုလုပ်ခြင်းအား ဖြင့် သက်တမ်းတို နိုင်သလို စိတ်ကြိုက်လဲ ချိန်လို့
အဆင်မပြေပါဘူး..ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခဲ့ ဖူးပါတယ်..ဒါကြောင့် designer တစ်ယောက်ဟာ client ကို မှန်ကန်တဲ့ educate ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ အထဲမှာ
အခု light နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ သတိချပ်ဖွယ်ပါပဲ။ အဲ CFL dimmer lamp တွေကိုလည်း ထုတ်ပါတယ်.. ဈေးကလည်း ပိုများပြီး ...သူ့ရဲ့dimmer လုပ် နိုင်တဲ့ ပမာဏက 20% နဲ့ ၈၀ %ကြားမှာ
ရှိတယ်လို့ လေ့လာဖူးပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ မသုံးဖူးသေးပါဘူး... နောက်တစ်ခုက .. သူ့ရဲ့ရနိုင်တဲ့ color တွေက တော့
'Warm white' or 'Soft white' ≤ 3000 K
'White' or 'Bright White' 3500 K
'Cool white' 4000 K
'Daylight' ≥ 5000 K
နောက် အသုံးနည်းပေမယ့် သိသင့်တဲ့ color တွေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့နေရာလေးတွေက..
* Red, green, orange, blue, and pink, primarily for novelty purposes
* Blue for phototherapy( အလင်းကုထုံး)
* Yellow, for outdoor lighting, because it does not attract insects
* Black light (UV light) for special effects
နောက်သိသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ safety ပါ..ဘယ်လို စွန့်ပစ်သင့်တယ် .စသဖြင့်ပေါ့
အဲဒီအပိုင်းကတော့ သပ်သပ်ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် အကြမ်းလောက်ပဲပြောပါ့မယ်..ကျွမ်းသွားတဲ့အခါ..သေသေချာချာ ပလတ်စတစ်နဲ့ ပတ်ထားပြီး
သိမ်းထားသင့်ပါတယ်..ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ ကွဲသွားခဲ့ရင် ထွက်လာမယ့် mercury gas တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးနဲ့ ကလေးငယ်လေး
တွေရဲ့အာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ။...
Posted by CreativeDesign at 12:17 AM
Labels: Lighting Technology